नेपाली समाजको बयान - Jhilko
नेपाली समाजको बयान
नेपाली समाजको जटिलता फुकाएर त्यस अनुसार सम्बोधन नगरिएकोले नै नेपालको राष्ट्रिय चरित्र बन्न सकेको छैन । पहिलो खण्डमा भाग्यवाद र विकासको प्रसंग विषयक आलेखमा यस बापत थोरै चर्चा गरियो । अर्थात नेपाली समाजको विविधतायुक्त नश्लीय र भाषिक चरित्रको परिचयसम्म भएको थियो । यो खण्डमा तिनै समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले लेखेको परिचय खण्डकै एक वाक्यमाथि यहाँ चर्चा गरेर यो आलेखलाइ सम्पन्न गरिनेछ ।
‘नेपाल जटिल जातीय मिश्रण भएको विविधतायुक्त समाज त हुँदै हो, त्यसमाथि यो सामाजिक र आर्थिक अवसरहरुको असमानताबाट ग्रसित छ ।’
नेपालको जटिलता :
नेपाली समाजको जटिलता जातीय हो कि होइन ? अझैपनि यो विवाद बाक्लो छ । एक नश्लीय कथित उपल्लो वर्ग यो मान्न तैयार छैन । उनीहरु नेपालको जटिलतालाइ अविकास मान्छन् । आर्थिक विकासको अभावमा वितरणको असन्तुलन हुन्छ यसैको फलस्वरुप नेपाली समाज जटिल बनेको ठान्छन । जातीय मिश्रणको जटिलता पटक्कै नमान्ने त्यो वर्गको प्रतिक्रिया स्वरुप अर्को पक्षले नेपाली समाजको जटिलता जातीय आधारलाई मात्र मान्दछ । तर, जातीय जटिलता वर्गीय जटिलताकै एउटा रुप हो । अझ नेपाली समाजको निर्माण त जात व्यवस्थाबाट सुरु भएको पाइन्छ । जात व्यवस्था वर्ग निर्माणको एउटा प्रस्थान बिन्दू थियो । यो विषयमा लामै समिक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रा. विष्ट कै भाषामा यो पनि भन्न सकिन्छ विविधतायुक्त मानवतत्वले विकासको सम्भावनालाई परिभाषित गर्नु पनि त्यत्तिकै जटिल छ । तर त्यो गाँठो त फुकाउनै पर्छ । यो जटिल प्रक्रिया फुकाउने शुभअवसर पनि हो । वर्गीय धरातलमा जात व्यवस्थाको व्यवस्था गरिएबाट पनि सामाजिक र आर्थिक अवसरबाट बन्चित भएको यथार्थ हो । नेपाली समाजको यो जटिलतानै आजको यथार्थ हो । राजनैतिक, समाज विज्ञान र उत्पादन सम्बन्धहरुले यस्तो गाँठो फुकाउन मद्धत गर्छ । नेपाली समाजको परिभाषा राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक विज्ञानसम्मत गरिनु पर्छ । तबमात्र यो गाँठो फुक्छ र नेपाली समाजको राष्ट्रिय चरित्र निर्माण हुन्छ ।
नेपाली समाजको अन्तरविरोध
जुनसुकै समाजमा वर्गीय अन्तरविरोध हुन्छ । तर सबै समाजमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक अन्तरविरोध हुन्न । अर्थात एउटै जातीय समुदायमा पनि यस्तो अन्तरविरोध रहन्न । तर जातीय अन्तरविरोध जटिल विषय हो । वर्गीय अन्तरविरोध हल गर्न जति सहज हुन्छ जातीय अन्तरविरोधको समाधान त्यतिकै जटिल र लामो प्रक्रिया हुन्छ । यस अर्थमा नेपाली समाजको अन्तरविरोधको विश्लेषण अनिवार्य सर्त हो । यस्तो अन्तरविरोधको विश्लेषण बेगर कसैले नेपाली समाज विकासको लागि वर्गीय रुपरेखामात्र कोर्छ भने त्यसको उपादेयता रहन्न । अहिलेसम्म नेपाली समाज विकासको रुपरेखा नकोरिनु यसैको परिणाम हो ।
वर्गीय र जातीय अन्तरविरोधको समग्र पक्ष नै नेपाली समाज विकासको प्रस्थान बिन्दू हो । नेपालमा भएका विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनमा यि दुबै अन्तरविरोधको सम्बोधन भएकोले नै ति अन्दोलनहरुले सार्थकता पाएका हुन । तर, आन्दोलनको जनादेश संस्थागत नहुँदा यसको जटिलता फुक्न सकेन ।
यो भूखण्डमा मानवहरु आउँदा तिनले संकिर्ण मानवत्वलाइ मात्र प्राथमिकता दिए । अर्थात मानव केन्द्रित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिए । आदिम साम्यवादको पतनसंगै दास युग हुँदै आजको पुँजीवादमा आइपुग्दा मानवत्व झनै संकिर्ण भयो । दास युगमा मालिकहरुको मात्र, सामान्ती युगमा सामान्तहरुको मानवत्व मात्र स्थापित भयो । पुँजीवादी युगमा आएर त मानवत्व विश्वका एकाध सय पुँजीपतिको हातमा पुग्यो । पुँजी निर्माणका सम्पूर्ण साधन स्रोत तिनै मुट्ठिभर पुँजीवादको कब्जामा जाँदैछ । यसले आधुनिक राज्यलाई आफ्नो मुट्ठिमा कैद गर्देछ । आजको राजनीतिको सेरोफेरो यसैमा केन्द्रित छ । ठूला बहुराष्ट्रिय बनियाहरुले आजको शासनसत्ता नेपथ्यमा बसेर चलाउँछन् । कुनै दिन इष्ट इण्डिया कम्पनी झैं अगाडि आउन सक्छन् । नयाँ आर्थिक उपनिवेश चलाउन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
भाग्यवाद र विकासको प्रसंग
बागलुङकी एक सङ्क्रमित निको हुँदै
कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित बागलुङ नगरपालिका–३ की ६५ वर्षीया महिलाको तेस्रो जाँचको रिपोर्ट...
पेनिना निरक्षर र विधवा छिन् । उनी मानिसहरुको कपडा धोएर आफ्नो र बच्चाको गुजारा गर्थिन्...